मृगौलापीडित गंगाको उपचारमा सहयोग जुट्दै | eAdarsha.com
मृगौलापीडित गंगाको उपचारमा सहयोग जुट्दै
हेमजा, २८ कात्तिक। दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि अस्पतालमा उपचाररत् अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२, दीपको डिल निवासी गंगा दाहालको उपचारका लागि सहयोग जुट्न थालेको छ।
३० वषे दाहालको दुवै मृगौर्ला फेल भएपछि उपचारार्थ हाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरामा भर्ना गरिएको छ । उपचारमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ लाग्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर दाहालको परिवार संकटमा परेको थियो।
हाल फिनल्याण्ड रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२, सेराचौरका रेशम अधिकारीको नेतृत्वमा संकलित ७६ हजार रुपैयाँ अधिकारीका भाइद्वय विष्णुप्रसाद अधिकारी र हरि अधिकारीले मंगलबार अस्पतालमै पुगी स्वयं गंगा र उनका श्रीमान् ऋषिराम दाहाल -होमनाथ) लाई हस्तान्तरण गरे। उनको उपचारका लागि हालसम्म चार लाख ५० हजार सहयोग संकलन भइसकेको ऋषिराम दाहालले बताए ।
यअसघि काठमाडौंस्थित नेशनल किड्नी सेन्टर, गण्डकी मेडिकल कलेज र मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा एक महिना अघिदेखि उपचार भइरहे पनि बीसको उन्नाइस भएको छैन। गंगाले मंगलबार डाइलोसिस गरेको हातमा पीडा थपिएको जनाइन्।उनी सहयोग जुटदै गए बाँच्ने आश रहेको बताउँछिन्। अस्पतालको मेडिकल वार्ड १११ नम्बरको कोठाको ५१ नं. बेडमा उपचाररत दाहालको सातामा दुर्इ पटक डाइलोसिस गर्नुपर्छ ।
गंगालाई लेखनाथ रिठेपानी निवासी उनकी माहिली दिदी पार्वती सुवेदीले मृगौला दिन तयार भएकी छन्। मृगौला प्रत्यारोपणमै करिब १० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि दाहाल परिवारले उपचारको लागि आर्थिक संकलनको याचना गर्दैआएको छ । गंगाको उपचारमा सहयोग गर्न चाहनेले उनको नाममा रहेको एनआइसी एसिया बैकको खाता नं. २८७७७७६९७५२४००१ मा रकम जम्मा तथा उनका श्रीमान्को मोवाइल नं ९८०४१३१५२९ वा ९८०४१५०२७६ मा सर्म्पर्क गर्न सकिने परिवारजनले जनाएको छ।